Nyocha nke Parrot Mambo, obere obere mmiri iji tụlee | Akụkọ akụrụngwa
Nyocha nke Mambo Parrot, obere obere mmiri iji tụlee
Mgbe ị na-azụ ụgbọ mmiri na-enweghị nnukwu ego, obere drones abụrụla nhọrọ kachasị mma. Drones na arụmọrụ na-adịghị mma na ahụmịhe ụgbọ elu na-adịghị mma na-emetụtakarị ihu ahịa ahịa n'ịntanetị na ị na-eche na ị gaghị enweta ihe dị mma na ụdị a, mana icheoku chọrọ ịgbanwe ihe Mambo ya.
Parrot Mambo bụ aha nke obere obere mmiri nwere nnukwu njirimara Ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere drones yiri nke ahụ, ọ bụ ezie na o doro anya na ọ na-eme ya na ọnụahịa dị elu karịa ndị a na-agbanyeghị na otu onye chọrọ ikpori ndụ ga-adị njikere ịkwụ ụgwọ. Anyị na-enyocha otu n'ime drones kachasị mma na ahịa.
2 Na-akwọ ụgbọala
Site nha nke 18 × 18 na naanị gram 63, ọ bụ ezigbo mmiri maka iji ime ụlọ. Enweghị njikwa dịpụrụ adịpụ (rere dị ka nhọrọ) pụtara na a ga-eji ngwaọrụ mkpanaka anyị, ma smartphones ma mbadamba, rụọ ọrụ ya. ekele na ngwa Freeflight Mini, dakọtara na ngwaọrụ iOS y android na n'efu. A Bluetooth 4.0 njikọ bụ ihe na-enye ohere njikọ na anyị smartphones na nwere a nso nke ruo 20 mita.
Batrị ahụ dị ihe dị ka nkeji 9 ma ọ bụrụ na anyị ejighị ngwa ndị mere Mambo a ihe pụrụ iche: ihe mkpuchi pellet plastic na tweezers nke etinyere n’elu ya na-eme ka ọ bụrụ ezigbo egwuregwu ụmụaka maka ụmụaka (ma ọ bụghị obere) nke ụlọ. N'ime ọkara awa anyị ga-agbanye batrị ahụ, nke na-adịghị njọ mana ịnweta batrị ọzọ na-adịkarị mkpa inwe a obere drone. Igwefoto Mp0,3 Mpx na ihe mmetụta dị iche iche (accelerometer, gyroscope, barometer, sensor inertial na baroscopic) mezue nkọwa.
Mkpụrụ Parrot a bụ ezigbo mmiri maka ndị ọhụụ na ụwa a, n'eziokwu, ịdị mfe ya anaghị eme ka a tụrụ aro maka onye ọ bụla na-achọ ihe dị elu. Data na iwepụ ga-ekwe omume na aka nke bọtịnụ na ihuenyo ahụ, ma ebe ọ bụ na nwere akpaka elu akara na kwụsie ike enviable site ọtụtụ elu Atiya drones, ị ga - eche naanị maka ịgagharị na ya na - adabaghị na mgbochi. Otu obere ala bụ na enwere oge n'agbata iwu gị na nzaghachi nke drone nke enweghị iru ala na mbụ mana nke ị ga-eji mee ya n'oge na-adịghị anya wee mụta ịkwụ ụgwọ. Dị ka ha na-ekwu site na njikwa njikwa (nhọrọ) a na-edozi ya na njikwa ahụ zuru oke.
Obere mmiri a nwere ohere ịhapụ aka gị site na ịmalite ya elu ma ọ bụrụ na ịchọrọ pirouettes ị nwere ike ime ha naanị site na ịpị bọtịnụ na ekwentị gị. Enwere ike ịhazi njikwa na mgbagwoju anya dị ukwuuI nwedịrị ike ịbawanye ọsọ nke mmegharị ahụ maka ndị chọrọ nsogbu karịa, mana na-eburu n'uche mgbe niile na ọ bụghị mmiri maka ndị ọrụ toro eto, dị anya na ya. N'ezie, njikwa dị na mpụga dị mgbagwoju anya ozugbo enwere ifufe, na-efunahụ nkwụsi ike ahụ e ji mara ya.
Parrot Mambo abụghị naanị ọpụrụiche n'ihi na ọ nwere teknụzụ karịa ka a tụrụ anya n'ụdị ụdị a, mana ọ gụnyere ụfọdụ ngwa izizi mbụ: gbọmgbọm na tweezers. Ha bụ obere obere ihe egwuregwu abụọ nke na-agbakwunye n’elu na sekọnd ole na ole na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ihe dị iche karịa ịfegharị. Otinggba bọọlụ rọba na drone dị oke ọnụ maka nwa dị afọ iriỌbụna maka onye toro eto, ịnwa iji ihe dị iche iche were ihe na-agaghị ekwe omume mana ọ bụ ihe ọchị.
N'ezie, atụla anya na site na ngwa ndị etinyere na drone na iji ha batrị ga-erute gị n'ime nkeji 9, tere aka ya. Na ihu ọma, ozugbo batrị gwụchara, LEDs abụọ ahụ na-acha uhie uhie wee daa n’udo. Ngwa ahụ na - enye gị ohere ịmata batrị fọdụrụnụ oge niile.
Ngwa ọzọ Parrot Mambo nwere ma nke etinyegoro n'ime ahụ ya bụ igwefoto. Ọ bụ naanị akụkọ ihe mere eme, n'ihi na ọnọdụ ya ma ọ bụ àgwà ya anaghị enye anyị ohere ime ọtụtụ ihe. Ga-enwe ike iwere zenith captures na nke dị obere ala, ebe ọ bụ na 0,3 Mpx ya anaghị enye ọtụtụ. Inweta foto anaghị agba agba ma ọ bụ na-enweghị mkpọtụ siri ike, ọ bụ ezie na emezuru ya. N'agbanyeghị nke a, ị nwere ike ịnweta njide na-atọ ọchị n'ime ụlọ, site na echiche ị na-anaghị ahụkarị.
Site na njikwa na nkwụsi ike dị elu karịa nkezi nke ọtụtụ ụdị n'ụdị ya, Parrot mini drone a dị mma maka ndị chọrọ ibido ụdị ngwaọrụ a ma ọ bụ inye onyinye. Nwatakịrị ọ bụla gafere afọ iri ga-enwe ike ijikwa ya were nwayọ site na obere ọrụ n’echeghị echiche maka iguzosi ike n’ezi ihe ya. Maka ego efu nke € 99 na Amazon Ọ bụ ezigbo atụ aro maka ndị chọrọ ịmalite n'ụwa a ma ọ bụ mee ezigbo onyinye.
Ọ kwụsiri ike ma dịkwa mfe ijikwa
Achịkwa site na smartphone na mbadamba
Ezigbo ihe na imewe
Ezigbo maka ime ụlọ
Gbọmgbọm na clamps maka mgbakwunye ọchị
Njikwa mgbagwoju anya n'èzí na ikuku
Igwefoto dị ala
Obere oge na njikwa
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ batrị nke abụọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Nyocha nke Mambo Parrot, obere obere mmiri iji tụlee
iOS 11 na watchOS 4 na eze abata na ngwaahịa Apple